News - Obi ụtọ na nkwado na ntụgharị expo China 2021
Na Eprel 22, IE expo China 2021 agwụla na Shanghai, China. Anyị emeela ezi mmekọrịta mmekọrịta na ndị ahịa si n'akụkụ ụwa niile na ngosi.
Anyị egosipụtala ụfọdụ ngwaahịa na Ngosipụta, dị ka mpempe akwụkwọ metal eriri laser ịcha igwe, igwe akuku laser, efere na tube laser ọnwụ igwewere gabazie. N'ihi ogo dị elu na asọmpi asọmpi, ọtụtụ ndị na-azụ ahịa nabatara ngwaahịa anyị. Ndị ahịa ahụ siri ike nyere ụlọ ọrụ anyị nnukwu ọnụahịa.
Guohong Laser Technology (Jiangsu) Co., Ltd. aụlọ ọrụ saị specializes na nyocha na mmepe, mmepụta na ọrịre nke eriri laser ịcha igwe. Anyị nwere injinịa na teknụzụ na ndị ọrụ njikwa na ihe dị ka afọ ole na ole na ụlọ ọrụ ịcha igwe laser.
“Ime ihe n'eziokwu, ịdị mma, ibu ọrụ bụ isi ebumnuche anyị, anyị ga-enye gị ngwaahịa kacha mma na ọnụahịa asọmpi. Obi welcometọ anabata ndị enyi si n’ụlọ na sara mbara soro anyị nwee mkparịta ụka azụmahịa!